Tantara · Janoary, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Tantara · Janoary, 2020
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Janoary, 2020
Indranteny Yorùbá: Ny fomba fivoaran'ny fiteny
Afrika Mainty27 Janoary 2020
Ny fampiasana voambolana amin'ny endriny nahafantarana azy no miantoka fa mbola ao tsara ilay kolontsaina, velona amin'ny alalan'ny fiteny.
Naterina ho amin'ny toerana hialàny sasatra ny taolambalon'ireo Olona Voalohany tao Trinité sy Tobago
Karaiba12 Janoary 2020
Naverina nalevina ny taolambalon'ireo razambe vazimba teratany niisa 60, ary natao araka ny tokony ho izy tamin'ny fomba feno fanomezamboninahitra ny maty sy fanekena ny lanjan'ny vondrompiarahamonin'ireo Olona Voalohany tao an-toerana.
Firenena tsy ankatoavina ve i Taiwan?
Azia Atsinanana10 Janoary 2020
"Raha afa-po amin'ny toe-draharaha tsy mihetsika amin'izao fotoana izao ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena rehefa mifampiraharaha tsirairay avy amin'i Taiwan sy amin'i Shina, misy kosa ireo hery politika amin'ireo toerana roa ireo no manandra-teny hisian'ny fanovana."
Taiwan: Topimaso amin'ny fifidianana filoham-pirenena taona 2020 amin'ny alalan'ny lalao famoronana petadrindrina ao amin'ny aterineto
Amin'izao ankatoky ny fifidianana izao, mamorona petadrindrina momba ny fifidianana ireo mpampiasa aterineto amin'ny alalan'ny tenifototra #GraphicDesignForDemocracy.
Taona enina taorian'ilay famoretana nahafaty olona natao an'ilay fitokonan'ny mpiasa amin) orinasa mpanao akanjo tao Kambodza, tsy antenaina intsony ny fitsaràna hoy ireo fianakaviana
Azia Atsinanana08 Janoary 2020
" Toa tsy mbola manangasanga eny amin'ny faravodilanitra raha izay rariny izany, na toy ny mitady fanjaitra ao anaty fanambanin'ny ranomasina. Tsy mbola nahita izay mangirana momba ny rariny ho anay izahay."